အချိန်ဆွဲပုံများ (Delaying Strategies) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on February 26, 2013 at 17:42 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အရင်တစ်ပတ်က ကြားဖြတ်ပြောဆိုပုံတွေတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ့်ကိုချောင်ပိတ် မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေ၊ ကိုယ်မလိမ့်တပတ်လုပ်ထားမိလို့မဖြေချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ အချိန်ဆွဲထားနဲ့ နည်းတွေ (delaying strategies) တွေနဲ့ပြန်တုန့်ပြန်နိုင်အောင် တင်ပြထားပါတယ်။ သာမန်လူမှု ဘ၀သုံးကနေ presentation ဟောပြောပွဲတွေမှာ တက်ပြောရာအတွက်ပါ အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်းတွေဖြေနိုင်တာဖြစ်သင့်ပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့မဖြေသင့်တာတွေလည်းရှိတယ်လေ။
What do you mean by that? အဲဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲ။
What made you think that’? ဒါဖြစ်လို့ဒီလိုထင်ရတာလဲ။
What are you referring to specifically? ဘာတစ်ခုခုကိုသီးခြားရည်ညွှန်းနေတာလဲ။
When did you mean when you said that’? ခင်ဗျားပြောတာဘယ်အချိန်ကကိုဆိုလိုတာလဲ။
Could you give me an example of what you’re talking about? အခုခင်ဗျားပြောတဲ့အကြောင်းကို နမူနာတစ်ခုလောက်ပေးလို့ရမလား။
မေးတဲ့သူပျင်းသွားအောင် မေးခွန်းတွေ၊ အသုံးမ၀င်တဲ့အချက်အလက်တွေ အများကြီးနဲ့တုန့်ပြန်ပါ။
To be honest that'sadifficult question, primarily because...
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ဒီမေးခွန်းကအဖြေရခက်ပါတယ်။ အရင်းခံအကြောင်းကတော့
I'm basically in favour of it, but if you really want to know what I think, I'd like to take you back to...
အခြေခံအားဖြင့်တော့ အဲဒါကိုကျွန်တော်လည်းလိုလားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ဘယ်လို ထင်တယ်ဆိုတာတကယ်သိချင်ရင်တော့ . . . ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြန်သွားမှဖြစ်မယ်။
That's interesting that you say that because once l...
ခင်ဗျားပြောတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်တုန်းက . . .
Well, as you know, this all started way back in March 2005 when...
ကဲခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်း ဒီအရာအားလုံးဟာ ၂၀၀၅ မတ်လ . . . လုပ်/ဖြစ် တုန်းကစခဲ့တာပဲ။
Well, the way I see it is that if..
အင်း ကျွန်တော်မြင်ပုံကတော့ . . . လျှင်
That‘savery good question. However, the reality is that...
ဒါစိတ်ဝင်စားစရာမေးခွန်းတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် အမှန်တရားက . . .
|t’sanice idea in theory, but “Personally, I'd say it's moreaquestion of."
သီအိုရီအရတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဒါဟာ . . . နဲ့ပိုပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလို့ထင်တယ်။
Well, I think the real question has to be...
အင်းကျွန်တော်ထင်တာက တကယ့်မေးခွန်းဟာ . . . ဖြစ်သင့်တယ်။
The important aspect of this is...
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးတဲ့ရှုထောင့်ကတော့ . . .
What is very clear to me is that ...
ကျွန်တော့်အတွက်ရှင်းနေတဲ့အချက်ကတော့ . . .
To be honest, it all depends how you look at it.
. . .က ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်တယ်။
Well, if you ask me, it all depends on...
ကောင်းပြီ။ ကျွန်တော့်ကိုမေးရင်တော့ . . . အပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲ။
Hey, did I tell you about the time I...
ဟေး ငါ. . . အချိန်ကအကြောင်းကို ငါပြောမိသေးလား
Hey, did you see that ﬁlm last night?
Anyway, what are you going to do this weekend?
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းဒီတစ်ပတ်စနေတနင်္ဂနွေ ဘာလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲ။
ဒီပြောဆိုပုံလေးကိုအောက်ပါ dialogue လေးနဲ့တွဲလေ့လာလိုက်ရင်ပိုသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။
Janet: Yes, Max?
Max: Have you been taking my foodd again?
Max: Some of my food is missing from the fridge
Janet: Erm. .. What seems to be missing?
Max: l cookedaroast last night. And I put the leftovers in the fridge. Now it's all gone.
Janet: You know, it's interesting you mention roasts. My grandmother does an incredible roast. You should try it one day.
Max: l’d like that. But, back to my leftovers. Did you eat the food I left in the fridge?
Janet: That'savery good question. But I think the real question is why you're cooking yourself meals you can't ﬁnish.
Mex: l do ﬁnish them... the next clay! Where are my leftovers?
Janet: Well, it really depends on what you mean by leftovers.
Mex: And what about my bottle of champagne? That's gone too.
Janet: Erm. .. I'll have to get back to you on that one.
အရငျတဈပတျက ကွားဖွတျပွောဆိုပုံတှတေငျပွခဲ့ပါတယျ။ ဒီတဈခါတော့ ကိုယျ့ကိုခြောငျပိတျ မေးလာတဲ့မေးခှနျးတှေ၊ ကိုယျမလိမျ့တပတျလုပျထားမိလို့မဖွခေငျြတဲ့အခါမြိုးမှာ အခြိနျဆှဲထားနဲ့ နညျးတှေ (delaying strategies) တှနေဲ့ပွနျတုနျ့ပွနျနိုငျအောငျ တငျပွထားပါတယျ။ သာမနျလူမှု ဘဝသုံးကနေ presentation ဟောပွောပှဲတှမှော တကျပွောရာအတှကျပါ အသုံးဝငျနိုငျပါတယျ။ မေးခှနျးတှဖွေနေိုငျတာဖွဈသငျ့ပမေယျ့တဈခါတဈရံမှာတော့မဖွသေငျ့တာတှလေညျးရှိတယျလေ။
What do you mean by that? အဲဒါဘာကိုပွောခငျြတာလဲ။
What made you think that’? ဒါဖွဈလို့ဒီလိုထငျရတာလဲ။
What are you referring to specifically? ဘာတဈခုခုကိုသီးခွားရညျညှနျးနတောလဲ။
When did you mean when you said that’? ခငျဗြားပွောတာဘယျအခြိနျကကိုဆိုလိုတာလဲ။
Could you give me an example of what you’re talking about? အခုခငျဗြားပွောတဲ့အကွောငျးကို နမူနာတဈခုလောကျပေးလို့ရမလား။
မေးတဲ့သူပငျြးသှားအောငျ မေးခှနျးတှေ၊ အသုံးမဝငျတဲ့အခကျြအလကျတှေ အမြားကွီးနဲ့တုနျ့ပွနျပါ။
ရိုးရိုးသားသားပွောရရငျ ဒီမေးခှနျးကအဖွရေခကျပါတယျ။ အရငျးခံအကွောငျးကတော့
အခွခေံအားဖွငျ့တော့ အဲဒါကိုကြှနျတျောလညျးလိုလားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ကြှနျတျောဘယျလို ထငျတယျဆိုတာတကယျသိခငျြရငျတော့ . . . ဆိုတဲ့အပိုငျးကိုပွနျသှားမှဖွဈမယျ။
ခငျဗြားပွောတာစိတျဝငျစားစရာကောငျးပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြှနျတျောလညျးတဈခြိနျတုနျးက . . .
ကဲခငျဗြားတို့သိတဲ့အတိုငျး ဒီအရာအားလုံးဟာ ၂၀၀၅ မတျလ . . . လုပျ/ဖွဈ တုနျးကစခဲ့တာပဲ။
အငျး ကြှနျတျောမွငျပုံကတော့ . . . လြှငျ
ဒါစိတျဝငျစားစရာမေးခှနျးတဈခုပါ။ ဒါပမေယျ့ အမှနျတရားက . . .
သီအိုရီအရတော့ကောငျးတဲ့စိတျကူးတဈခုပါ။ ဒါပမေယျ့ကြှနျတျောအနနေဲ့ ဒါဟာ . . . နဲ့ပိုပတျသကျတဲ့မေးခှနျးလို့ထငျတယျ။
အငျးကြှနျတျောထငျတာက တကယျ့မေးခှနျးဟာ . . . ဖွဈသငျ့တယျ။
ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျလို့အရေးကွီးတဲ့ရှုထောငျ့ကတော့ . . .
ကြှနျတေျာ့အတှကျရှငျးနတေဲ့အခကျြကတော့ . . .
. . .က ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတဲ့အပျေါမူတညျတယျ။
ကောငျးပွီ။ ကြှနျတေျာ့ကိုမေးရငျတော့ . . . အပျေါမှာမူတညျတယျလို့ပဲပွောရမှာပဲ။
ဟေး ငါ. . . အခြိနျကအကွောငျးကို ငါပွောမိသေးလား
ဘာပဲဖွဈဖွဈ၊ မငျးဒီတဈပတျစနတေနင်ျဂနှေ ဘာလုပျဖို့အစီအစဉျရှိလဲ။
ဒီပွောဆိုပုံလေးကိုအောကျပါ dialogue လေးနဲ့တှဲလလေ့ာလိုကျရငျပိုသဘောပေါကျလာပါလိမျ့မယျ။
Permalink Reply by Cindy on February 27, 2013 at 20:36
It's very useful for me Sir.
Thanks ! Let me share
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on February 27, 2013 at 23:23
Permalink Reply by hnineikhine on February 28, 2013 at 10:26
Permalink Reply by san san oo on February 28, 2013 at 10:55
So great for your providing English for us all. Thanks for that.
It would be more great if you could provide sometime for the written style of company letters ( communication both for internal & external affairs).
With best wishes for everybody.
Permalink Reply by Myat Myat Thin on February 28, 2013 at 11:21
Permalink Reply by Thike Htun on February 28, 2013 at 11:27
Permalink Reply by November Aye on February 28, 2013 at 12:18
Permalink Reply by Yee Mon Htwe on February 28, 2013 at 12:50
Permalink Reply by thinzar bo on March 1, 2013 at 7:32
Thanksalot for your lessons!!!!!
Permalink Reply by Lwae Thandar Htwe on March 2, 2013 at 18:34
Permalink Reply by pont pont on March 4, 2013 at 8:58
Very good lessons for us!
Permalink Reply by keinnayi on May 5, 2013 at 22:31
Thank you so much for your useful lessons!